Accueil > Gazetin'ny nosy > Taom-baovao malagasy: Aza atao toy ny valalan’amboa re !
Taom-baovao malagasy: Aza atao toy ny valalan’amboa re !
Nisokatra ny sabotsy faha-17 martsa teo ary hifarana anio alatsinainy faha-19 Martsa ny fankalazana ny Taom-baovao Malagasy. Hita taratra aloha fa efa manomboka fantatry ny Malagasy sasany ny momba azy io, ary voaporofo izany fa isa-taona dia saika mitombo hatrany ny olona mankalaza azy io. Na ny sokajin’olona voasarik’izy io aza dia tsinjo fa manomboka mahazo sehatra ny tanora.
Ny taom-baovao Malagasy dia miankina amin’ny hetsiky ny volana fa tsy mba toy ny fanisanandro Gregoriana, izay vaninandro tokana hatrany no anamarihana azy dia ny 1 Janoary isataona.
Ny Taom-baovao Malagasy koa dia nifono hevi-dalàna teo anivon’ny fiaraha-monina Malagasy hatrizay ny fankalazana azy. Tsy haitraitra na fety aman-danonana fotsiny, tsy araka izay niheveran’ny olona sasany azy isaky ny ankalazaina, fa vanim-potoana koa io anadiovana ny tsy nety rehetra teo anivon’ny fiaraha-monina. Fotoana amitranana ny fihavanana izay mety ho narisarisa na tapaka mihitsy teo anivon’ny fiaraha-monina. Ny fanadiovana koa moa dia midika fa nisy ota mety ho vita ka averina amin’io Taom-baovao io ny Hasina izay voaota fady…
Noho izany, tsy kolotsaina fe kolotsaina fotsiny araka izay mety ho fandraisan’ny sokajin’olona sasany azy ny Taom-baovao Malagasy fa fanoitran’ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny tontolom-piaraha-monina Malagasy mihitsy, na ara-toekarena na ara-politika (fifampitondrana sy fifampifehezana) na ara-tsosialy,… hatramin’ny kolotsaina.
Tsy tokony ho ambakan’ny fankalazana ny Taom-baovao fanao isan-taona araka ny fanisanandro mahazatra ny Taom-baovao Malagasy. Araho-maso ange fa ny taom-baovao sinoa, ohatra, dia tena anokanan’ny sinoa fotoana maharitra mihitsy ny fankalazana azy e! Amin’izany anefa dia miara-mientana ny vahoaka sinoa, na any Shina na ny miely patrana manerana an’izao tontolo izao, mankalaza izany, fa tsy hoe ny ampahan’ny sinoa ihany.
Tokony ho tsapantsika Malagasy fa raha manana finiavana hanarina ny firenena Malagasy amin’ny lafiny rehetra isika dia tsy tokony hanao amban-javatra ny teboka hiantohana ny fampivoarana sy ny fampandrosoana, ka iray amin’izany ny kolotsaina sy ny soatoavina Malagasy. Iray amin’izany ny fankalazana ny Taom-baovao Malagasy.
Mba firy isan-jaton’ny mpandraharaha ara-toekarena Malagasy re, ohatra, no hanome vahana izany taom-baovao Malagasy izany amin’ny taona ho avy ka hampitovy tantana ny fankalazana ny taom-baovao vahiny araka ny fanisanandro mahazatra amin’izao fotoana e? Ary mba homen’ny fitondram-panjakana lanja amin’izay ve izy io ka handraisana didim-panjakana fa ho andro tsy iasana nefa andraisan-karama? Amin’izay koa mantsy dia mba misy ny ezaka hankalaza azy sy hanomezana lanja azy amin’ny sehatra rehetra.